Vondrona Ascott Sun: fiaraha-miasa vaovao - ary inona no dikan'izany
Home » Lahatsoratra farany farany » Fanambarana ho an'ny mpanao gazety » Vondrona Ascott Sun: fiaraha-miasa vaovao - ary inona no dikan'izany
Tsindrio eto raha ity ny fanambaranao an-gazety! • Fanambarana ho an'ny mpanao gazety • Vaovao Mafana Vietnam
Voatonona amin'ity fanambarana an-gazety ity ve ianao, na manana antsipiriany bebe kokoa tokony ampiana?
Ascott dia hitantana vondrona 1,905 1 manerana ny marika fonenana telo samy hafa ao amin'ny Tay Ho View Complex an'ny Sun Group any Hanoi. Ny fivoarana miharo volo dia ho mariky ny vaovaon'i Vietnam, hanova ny faritry ny tanàna ary hamelombelona ny distrika manamorona ny faritr'i Tay Ho irery. Ascott dia hampiditra ny marika Crest Collection any Vietnam. Tsy misy any Frantsa irery izao, izao no voalohany The Crest Collection no hanomboka voalohany any Azia, manome traikefa manankarena miavaka amin'ny alàlan'ny fifangaroana toetra sy lova miavaka. Ascott dia hampahafantatra ihany koa ny sonia Ascott The Residence ary koa ny marika mitombo haingana indrindra, Citadines Aparthotel. Ascott The Residence dia manolotra traikefa manokana sy manokana ho an'ny vahiny raha ny Citadines Aparthotel kosa dia manolotra fahalalahana sy azo ampiharina amin'ny trano misy serivisy misy serivisy hotely ary koa traikefa voataona eo an-toerana. Ireo trano fonenana telo misy serivisy dia antenaina hisokatra amin'ny dingana manomboka amin'ny 2023Q XNUMX.
Nandritra ny lanonana fanaovan-tsonia natao teo amin'ny Ascott sy Sun Group, Andriamatoa Kevin Goh, tompon'andraikitra ambony an'ny CLI ho an'ny trano fonenana dia nilaza hoe: Manome antsika fidirana haingam-pandeha amin'ny fantsom-pamokarana tetikasa kalitao hampitomboana ny portfolio global sy ny fidiram-bolanay miverina rehefa misokatra sy milamina izy ireo. Izany dia mifanaraka amin'ny paikadim-pahazavana ataon'ny CLI. Ny fiaraha-miasa stratejika nataon'i Ascott miaraka amin'ny Sun Group hitantanana ny fampandrosoana lehibe indrindra misy trano misy serivisy ao Vietnam miaraka amin'ireo marika telo ananantsika dia mampiseho ny fahatokisany ny fahaizan'i Ascott manerantany sy ny lazany marika. Ity tetik'asa ity dia ho fampirantiana voalohany amin'ny fahaizan'i Ascott mandray vahiny. Miara-manantena ny hampiditra fanilo vaovao any Vietnam izahay, hisarika ny vahiny eo an-toerana sy iraisam-pirenena hahita ny tranony lavitra ny trano miaraka amintsika. Ny fiaraha-miasanay stratejika ihany koa dia hanokatra ny làlana ho an'ny Ascott hiara-miasa amin'ny tetik'asa fampiantranoana bebe kokoa miaraka amin'ny Sun Group amin'ny ho avy. ”
Ramatoa Nguyen Vu Quynh Anh, CEO, Sun Hospitality Group (SHG), marika fandraisam-bahiny an'ny Sun Group, dia nilaza hoe: "Faly ny Sun Group sy ny SHG hiara-miasa amin'i Ascott, iray amin'ireo orinasan-trano fandraisam-bahiny malaza indrindra eto an-tany, hahatratrarana ny vinanay ho an'i Tay Ho View Kompleks. Amin'ny maha-mpisava lalana amin'ny indostrian'ny fonenan'ny serivisy aziatika Pasifika, ny lazan'i Ascott iraisam-pirenena sy ny tamba-jotra dia mety tsara amin'ny tetik'asa iraisan'izao tontolo izao. Miaraka amin'ny zavatra niainan'ny Sun Group sy SHG tamin'ny tetik'asa maro eran'izao tontolo izao any Vietnam toa ny InterContinental Sun Peninsula Resort, JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay, Hotel de la Coupole - MGalog (Sa Pa), sns ary koa ny traikefa fandraisam-bahiny azon'i Ascott , matoky izahay fa ny Tay Ho View Complex no ho mari-trano farany maritrano hanintonana ny sain'ny rehetra. Tay Ho View Complex dia hamaritra ny fenitry ny fandraisana vahiny eto an-tanàna. Ankoatr'izay, ny tetikasa dia handrehitra ny fitomboan'ny harinkaren'i Hanoi ihany koa, hisarika ireo mpivarotra sy mpitsangatsangana ho any an-tanàna ary hanome tombony asa lehibe ho an'ny fiarahamonina. ”
Mijanona miaraka amin'i Ascott ao amin'ny Tay Ho View Complex, sary sokitra maritrano indrindra an'i Hanoi
Tay Ho View Complex dia miorina amin'ny iray amin'ireo distrika manokana indrindra an'i Hanoi ary eo akaikin'ny Farihy Andrefana malaza. Ho fanampin'ny trana fonenan'ny servisy an'i Ascott, ny fampiroboroboana koa dia misy singa ara-barotra sy antsinjarany. Tay Ho View Complex dia ho voahodidin'ny masoivoho, orinasa, trano fisakafoanana ary safidy antsinjarany maro. Izy io koa dia ho eo akaikin'ny Opera House ho avy izay hosokafana amin'ny ho avy. Ny distrika afovoan-tanànan'i Hanoi ao Hoan Kiem, My Dinh ary Ba Dinh, ary koa ny seranam-piaramanidina Iraisampirenena Noi Bai dia ao anatin'ny 20 minitra lavitra avokoa.
Ascott The Residence dia manolotra singa 1,167 ahitana suite, studio, efitrano iray misy efitrano fatoriana iray ka hatramin'ny efitrano fandraisam-bahiny ary unitie duplex, ny Citadines Apart'hotel kosa dia hanolotra singa 710 misy studio, trano iray hatramin'ny efitrano fatoriana iray ka hatramin'ny efitrano fandraisam-bahiny ary unitie duplex. Ny Crest Collection dia hanolotra singa manokana 28, ahitana trano duplex telo sy efatra efitrano fatoriana. Anisan'ireo fotodrafitrasa ao amin'ireo trano telo ireo ny efitranon'ny mponina, efitrano famakiana, ary gymnasium. Hanana fidirana amin'ny trano fisakafoanana avo lenta ihany koa ny mponina amin'ny alàlan'ny chef malaza manana kintana Michelin na malaza manerantany mitondra vahiny amin'ny fitsangatsanganana mahandro sakafo. Hisy klioba ihany koa ary misy bar any an-tampon-trano eo ambonin'ny fivoarana mitambatra ho an'ny vakansy mba hiala sasatra aorian'ny andro lava nisotroan'ireo zava-pisotro nisotroan'ilay bar.
Ny fisian'i Ascott any Vietnam
Ascott dia nanao ny diany voalohany tany Vietnam 27 taona lasa izay tamin'ny fisokafan'ny Somerset West Lake Hanoi. Androany, Ascott no tompona trano fandraisam-bahiny lehibe indrindra eto amin'ny firenena. Miaraka amin'ny fanampiana ireo trano fonenana telo misy servisy, ny portfolio an'i Ascott any Vietnam dia misy trano fandraisam-bahiny manodidina ny 9,200 amin'ny trano 30 mihoatra ny tanàna 12 toa an'i Binh Duong, Cam Ranh, Danang, Hai Phong, Halong, Hanoi, Ho Chi Minh City, Hoi An, Lao Cai, Nha Trang, Sa Pa sy Vung Tau. Tamin'ny volana Jona 2021, ny vola tsy miankina an'ny Ascott, Ascott Serviced Residence Global Fund, dia nahazo ilay singa 364 Somerset Metropolitan West Hanoi izay kasaina hisokatra amin'ny 2024.